होशे 8 ERV-NE - मूर्ति पूजाले - Bible Gateway
होशे 7होशे 9
होशे 8 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
मूर्ति पूजाले नाश गराउँछ
8 “तुरही फुक! परमप्रभुको मन्दिरमाथि एउटा चील उडिरहेकोछ। किनभने तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे र मेरो सम्झौताको विरूद्धमा अपराध गरे।2तिनीहरूले मसित चिच्याएर भन्छन, ‘हे हाम्रा परमेश्वर हामी इस्राएलीहरूले तपाईंलाई चिन्दछौ।’3जे भलो छ त्यो इस्राएलले फालिदिएकोछ। बैरीले त्यसलाई खेद्नेछ।4तिनीहरूले राजाहरू नियुक्त गरे, तर मेरा अनुमति लिएनन्। तिनीहरूले राजकुमारहरू नियुक्त गरे, तर ती मानिसहरूलाई म चिन्दिनँ। तिनीहरूले सुन र चाँदीका मूर्तिहरू आफ्ना निम्ति बनाए, अत तिनीहरूलाई नष्ट गरिनेछ। 5-6 ए सामारिया, मैले तिम्रो बाछा मिल्काइ दिएँ! ‘मेरो रीस तिनीहरूको विरूद्धमा दन्केको छ!’ तिनीहरू कहिलेसम्म अशुद्ध रहनेछन्? एकजना इस्राएली कारीगरले बाछा बनायो। त्यो परमेश्वर होइन। निश्चय नै सामरियाको बाछालाई टुक्रा-टुक्रा पारिनेछ।7तिनीहरू बतास छर्दछन् र तिनीहरूले भुँवरी कटनी गर्नेछन्। तिनीहरूको फसल केही रहनेछैन। त्यसको डाँठमा केही दाना लाग्नेछैन। पसाइहाले तापनि विदेशीहरूले खाइहाल्नेछन्।
8 “इस्राएल नष्ट भयो।
अब तिनीहरू जाति-जातिहरूका बीचमा
बेकामको भाँडा जस्तै भएका छन्।
9 वन-गधा आफैं एक्लै हिँडिरहे झैं
तिनीहरू अश्शूरमा गए।
एप्रैमले आफ्नो निम्ति ‘ज्यालामा’ नाठाहरू राखेको छ।
10 अन्य जातिहरूलाई तिनीहरूले ‘ज्यालामा’ राखे
तापनि म तिनीहरूलाई अब चाँडै जम्मा गर्नेछु,
राजा र भारादारहरूलाई अभिषेक गर्न,
केही समयका निम्ति तिनीहरू रोकिन्छन्।
इस्राएलले परमेश्वरलाई भूले र मूर्तिहरूलाई पूजे
11 “एप्रैमले पाप गर्नलाई वेदीको संख्या बढायो।
ती त्यसको निम्ति पाप गर्ने वेदीहरू भए।
12 मैले त्यसका निम्ति मेरो व्यवस्थामा,
लाखौं विधिहरू लेखें तापनि
ती कुरा बीराना ठानिनेछन्।
13 मेरो भेटीको लागि तिनीहरूले
मासु चढाउँछन् र खान्छन्,
तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्न।
अब उहाँले तिनीहरूलाई
तिनीहरूको पापको निम्ति दण्ड दिनुहुनेछ।
तिनीहरूलाई मिश्रमा नै फर्काइँनेछ।
14 किनभने इस्राएलले आफ्ना सृष्टिकर्तालाई बिर्सेर महलहरू बनायो,
औ यहूदाले चाँहि पर्खाल भएका शहरहरूको संख्या बढायो।
तर म तिनीहरूका शहरहरूमा आगो लगाइदिनेछु
र त्यसले त्यसका महलहरू भस्म पार्नेछ।”